Maxay tahay sababta Itoobiya oo xeeb la’aan ah u sameysanayso ciidamo badeed? - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka Imperial War Museum
Image caption Alexander Desta
Balse hadda dib ayay uga fiirsanaysaa go'aankaas, waxaana muuqata saansaan ah in ay raadinayso saldhig badeed oo laga doonayo dalalka dariska la ah.
Ra'isulwasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa dhawaan taleefishinka dalkaasi ka yiri "Waxaan dhisaynaa ciidammo xoog badan oo badeed, kuwaas oo ugu xoog badan Afrika".
Wakaaladda wararka ee Fana ayaa Ra'isulwasaare Abiy kasoo xigatay in uu yiri in ciidammada ay la jaanqaadayaan waxyaabaha kasoo kordhay adduunka, islamarkaasna sameeyaan isbadalada loo baahanyahay.
"Waxaan ka cabsanaynaa in Jabuuti xitaa ay go'aan ku yeelan weyso waxa ka dhacaya gudaha dalkeeda, oo lagala wareego awoodda, tanina waa halis soo foodsaartay Itoobiya" ayuu yiri Roba.
Image caption Abiy Ahmed
Hadalkiisa ayuu ka dhabeeyay kadib markii uu ogolaaday go'aankii guddiga dhexdhexaadinta labada dal, kaas oo ahaa in Itoobiya ay ka baxdo magaalada Badme.
Mr Birhanemeskel ayaa yiri "Waa in dalalka geeska Afrika loo mideeyaa qaab dhaqaale, ciidammo badna mashruucaas ayuu qeyb ka yahay".
Sidaas oo ay tahay, Itoobiya waxa ay u muuqataa in ay ka go'antahay in ay dhisato ciidamo badan.